Spirit Airlines inounza migwagwa mitsva yepasi rose kuHouston Intercontinental Airport
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Spirit Airlines inounza migwagwa mitsva yepasi rose kuHouston Intercontinental Airport
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Guatemala Kuputsa Nhau • Honduras Breaking News • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau
Runako rune mutsindo uye tsika dzakasiyana dzeLatin America dzakamirira sezvo Spirit Airlines ichienderera mberi nekuwedzera kwayo kwepasirese, ino nguva kubva kuHouston! Kutanga naGunyana 6, 2018, Mweya uchatanga sevhisi kubva kuHouston's George Bush Intercontinental Airport (IAH) kuenda kuSan Salvador, El Salvador ine gore-rese sevhisi inomhanya katatu pasvondo kuMonseñor Óscar Arnulfo Romero International Airport (SAL). Zuva rinotevera, musi waGunyana 7, Mweya ichatanga nendege dzisingamire pakati peHouston neGuatemala City, Guatemala nebasa regore rose pakupedzisira richimhanya kana vhiki nevhiki kuLa Aurora International Airport (GUA). Izvo zvinowedzerwa zvinopa mari inokwanisika yekufamba kwenyika kuti uone shamwari, mhuri, kana kungo fara!
Nzira idzva dzichabatsira basa riripo reMweya riripo pakati peHouston neCancun neSan Jose del Cabo, Mexico, pamwe neSan Pedro Sula, Honduras. Nzira dzinogadzirirwa kusimbisa network inokura yeMweya nepo ichitsvaga zvakasiyana pane zvaidiwa neHouston. Chiziviso chinouya mavhiki mashoma mushure mekuziviswa naMweya kuti yaivhura nzira dzinosvika gumi nemaviri kubva kuOrlando, Florida kuenda kuLatin America neCaribbean.
"Kuwedzerwa kweSan Salvador neGuatemala City kunzvimbo yedu yekuenda kuHouston kuchapa vaenzi vedu dzimwe nzira dzekushanyira vadikani uye nekuona zvese zvinopihwa nenzvimbo dzinoshamisa idzi," akadaro Mark Kopczak, Mutevedzeri weMutungamiri weMweya weAirlines weNetwork Planning. "Mweya unoramba uchizviratidza semutungamiri mukufamba kuenda kuLatin America nekuCaribbean nekupa mibairo yakaderera kubvumira vakawanda kutora mukana webasa redu rakavimbika."
Houston Bush (IAH) kuenda / kubva Inotanga: Kakawanda:
San Salvador, El Salvador (SAL) * Nyamavhuvhu 6 3x vhiki nevhiki, gore rose
Guatemala Guta, Guatemala (GUA) * Nyamavhuvhu 7 3x vhiki nevhiki, gore rose
4x vhiki nevhiki, gore-rese mushure me11 / 8/18
San Jose del Cabo, Mexico (SJD) Iripo sevhisi 4x vhiki nevhiki, mwaka
Cancun, Mexico (CUN) Iripo sevhisi 3x vhiki nevhiki, gore rese
Mazuva ese muzhizha
San Pedro Sula, Honduras (SAP) Iripo sevhisi 4x vhiki nevhiki, gore rese